1 Tantara 26 | Baiboly | Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao
1 Tantara 26:1-32
26 Ary nozaraina ho toy izao ny mpiandry vavahady:+ Ny tamin’ny Korahita+ dia i Meselemia+ zanak’i Kore, taranak’i Asafa. 2 Nanan-janakalahy i Meselemia: I Zakaria no lahimatoa, Jediaela no faharoa, Zebadia no fahatelo, Jatniela no fahefatra, 3 Elama no fahadimy, Johanana no fahenina, ary Eliho-enay no fahafito. 4 Ary nanan-janakalahy i Obeda-edoma:+ I Semaia no lahimatoa, Jozabada no faharoa, Joa no fahatelo, Sakara no fahefatra, Netanela no fahadimy, 5 Amiela no fahenina, Isakara no fahafito, ary Peoletahy no fahavalo. Fa notahin’Andriamanitra i Obeda-edoma.+ 6 Ary i Semaia zanany dia nanan-janakalahy, izay samy mpitondra tao amin’ny fianakaviambe avy amin’ny rainy, satria lehilahy mahay sy matanjaka izy ireo. 7 Ary ny zanak’i Semaia dia i Otny, Refaela, Obeda, ary Elzabada, rahalahin’i Eliho sy Semakia, izay samy lehilahy mahay. 8 Taranak’i Obeda-edoma daholo izy ireo sy ny zanak’izy ireo mbamin’ny rahalahiny. Roa amby enimpolo no avy tamin’i Obeda-edoma, izay samy lehilahy nahay sy nanan-kery hanaovana fanompoana. 9 Ary nanan-janakalahy sy rahalahy i Meselemia.+ Valo ambin’ny folo izy ireo, sady lehilahy mahay avokoa. 10 Ary nanan-janakalahy i Hosa taranak’i Merary, ka i Simry no filoha, satria notendren’ny rainy ho filoha izy+ na dia tsy lahimatoa+ aza; 11 Hilkia no faharoa, Tebalia no fahatelo, ary Zakaria no fahefatra. Telo ambin’ny folo ny zanaka sy ny rahalahin’i Hosa. 12 Rehefa nozaraina toy izany ireo mpiandry vavahady, dia samy nanana ny anjara raharahany na izy ireo na ny filoha teo anivony.+ Izany no fanompoana nataony ho an’ny tranon’i Jehovah. 13 Koa natao ny antsapaka+ na ho an’ny kely na ho an’ny lehibe, araka ny fianakaviambeny,+ mba hahafantarana izay vavahady hambenany avy. 14 Dia azon’i Selemia+ ny vavahady tany atsinanana. Ary rehefa natao ny antsapaka ho an’i Zakaria+ zanany, izay mpanolo-tsaina+ hendry, dia azony ny tany avaratra.+ 15 Azon’i Obeda-edoma kosa ny tany atsimo, ary azon’ny zanany lahy+ ny trano fitehirizana entana.+ 16 Azon’i Sopima sy Hosa+ kosa ny tany andrefana, akaikin’ny Vavahady Saleketa, teny amin’ny lalambe miakatra, ka nifanandrify ireo antokona mpiambina.+ 17 Ary ny tany atsinanana dia Levita enina; ny tany avaratra efatra isan’andro; ny tany atsimo efatra isan’andro;+ ary tsiroaroa ny tany amin’ny trano fitehirizana entana.+ 18 Ary ho an’ny lala-mitafo* tany andrefana, dia efatra ny teo amin’ny lalambe+ ary roa ny teo amin’ny lala-mitafo. 19 Ireo no tamin’ny taranaky ny Korahita+ sy ny taranak’i Merary,+ rehefa natao ny fizarana ny mpiandry vavahady. 20 Ary tamin’ny Levita dia i Ahia no niandraikitra ny zava-tsarobidy+ notehirizina tao an-tranon’Andriamanitra sy ny zava-tsarobidy efa nohamasinina.+ 21 I Jehiely+ no tamin’ireo taranak’i Ladana,+ izany hoe ny taranaky ny Gersonita avy tamin’i Ladana, dia ireo lohan’ireo fianakaviambe avy tamin’i Ladana Gersonita. 22 Ary i Zetama sy Joela+ rahalahiny, zanak’i Jehiely no niandraikitra ny zava-tsarobidy+ tao an-tranon’i Jehovah. 23 Ary tamin’ny Amramita sy ny Jizarita sy ny Hebronita sy ny Ozielita,+ 24 dia i Seboela+ taranak’i Gersoma zanak’i Mosesy, no lehiben’ny mpiandraikitra ny trano fitehirizana entana. 25 Ary ny avy tamin’ny rahalahiny dia i Rehabia+ zanak’i Eliezera,+ i Jesaia zanak’i Rehabia, i Jorama zanak’i Jesaia, i Zikry zanak’i Jorama, ary i Selomota zanak’i Zikry. 26 Io Selomota io sy ny rahalahiny no niandraikitra ny zava-tsarobidy rehetra efa nohamasinin’i+ Davida+ Mpanjaka sy ny lohan’ireo fianakaviambe,+ sy ny lehiben’ny arivo, sy ny lehiben’ny zato, ary ny lehiben’ny tafika. 27 Nisy nohamasinin’izy ireo ny zavatra azo babo+ tany an’ady,+ mba hikojakojana ny tranon’i Jehovah. 28 Ary ny zava-drehetra nohamasinin’i Samoela mpahita,+ sy Saoly zanak’i Kisy, sy Abnera+ zanak’i Nera, ary Joaba+ zanak’i Zeroia,+ mbamin’ny zavatra hafa rehetra nohamasinina, dia teo ambany fiadidian’i Selomita* sy ny rahalahiny. 29 Ary tamin’ny Jizarita,+ dia i Kenania sy ireo zanany no nisahana ny andraikitra tany ivelan’ny tranon’Andriamanitra,+ ka izy ireo no mpiadidy sy mpitsara+ teo amin’ny Israely. 30 Ary tamin’ny Hebronita,+ dia i Hasabia mbamin’ny rahalahiny, no nisahana ny fitantanan-draharahan’ny Israely, tany amin’ny faritra andrefan’ny Reniranon’i Jordana, ka nanao ny asa rehetra ho an’i Jehovah sy ny mpanjaka. Lehilahy mahay izy ireo,+ ary fitonjato sy arivo ny isany. 31 Ary i Jerija+ no lohan’ireo fianakaviana sy fianakaviamben’ny Hebronita. Tamin’ny taona fahefapolo+ nanjakan’i Davida, dia notadiavina izay lehilahy matanjaka sy mahery teo amin’ny Hebronita, ka tany Jazera+ any Gileada+ no nahitana azy ireo. 32 Fitonjato sy roa arivo ny isan’ny rahalahiny, izay lehilahy mahay+ sady lohan’ireo fianakaviambe.+ Koa notendren’i Davida Mpanjaka izy ireo, mba hifehy ny Robenita sy ny Gadita ary ny antsasaky ny fokon’i Manase,+ ka hiandraikitra ny raharaha+ rehetra momba an’Andriamanitra sy ny mpanjaka.
^ Selomota eo amin’ny and. 25, 26.